Fizarana fanampiana sy fitsaboana Ahiana hatrany ny trangana kolikoly
Nanentana ny rehetra ny ny Transparency International Initiative International (TI-IM) hitoroka ireo izay manao kolikoly mandritra ny fizarana fanampiana na fitsaboana momba ny covid-19.
Mila fahasahiana avy amin’ny tsirairay izany hoy ny fikambanana mba tsy hisy indray ny fanararaotana indrindra ho amin’ireo tompon’andraikitra mpisehatra rehetra. Miantso avy hatrany na mandefa SMS amin'ny laharana 034 17 562 75 ireo izay mahita tranga na iharan’ny klikoly handraisana ny fepetra rehetra. Tsiahivina fa efa manahy ary nampitandrina ny TI-IM fa betsaka ny risika na kolikoly amin’ireo fanomezana rehetra voarain’i Madagasikara tamin’ny ady amin’ny valanaretina coronavirus. Tsy ho vita irery hoy izy ireo ny ady amin’ny kolikoly fa mila fifanampiana amin’ny vahoaka iray manontolo indrindra ny amin’ny fampitam-baovao.